THE BEST OPEN SOURCE or FREEWARE PROGRAMS — MYSTERY ZILLION
THE BEST OPEN SOURCE or FREEWARE PROGRAMS
July 2008 edited July 2008 in File Request
အခု အင်တာနက်က အလကား download ရနိုင်တဲ့ programs တွေရဲ့ site ကို MZ members များအတွက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
free ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ spyware တွေပါမှာကြောက်စရာမလိုပါဘူး။မပါလဲ မပါနိုင်ပါဘူး။
 comodo ကပေးတဲ့ products တွေထဲမှာ firewall ကအကောင်းဆုံးပါ။
 Avira ကပေးတာတွေမှာတော့ Avira AntiVir Personal ကအကာင်းဆုံးပါ။
 spyware ဆိုရင်တော့ spywareterminator ကအလကားပေးတဲ့ Spyware Terminator with Web Security Guard ကအတော်ကိုကောင်းပါတယ်။
Cyberhawk Cyberhawk provides HIPS behavior-based security monitoring to protect you from malicious programs such as Trojans, viruses, malware and other threats without relying on any signature updates. HIPS (Host Intrusion Prevention System)
IceSword Effective tool against "rootkits," virus-type programs that can evade detection by ordinary anti-virus products. This isagood manual scanner. While rootkits are rarer, they are particularly nasty and missed by most security programs.
SpamGourmet Forwards TO your real email address all the emails sent to your SpamGourmet disposable addresses. Use this when registering at miscellaneous sites instead of your real email address...helps prevent spam by not giving out your real email address.
Sandboxie A virtual environment which prevents files from loading outside the "sandbox" onto your system. With Sandboxie, you can keep ActiveX turned on, and have both security and functionality. You can install programs or surf without anything actually installing on your computer. When you click the Sandboxie icon, tell it what your default browser is and it opens that inside the sandbox. It is that easy. When you finish the session, delete the sandbox and everything is gone (including your surf history.)
AVGAntiSpyware Ewido has been incorporated into AVG products asasuite. It is now called AVG Anti-Spyware. The real time protection times out on the free version, but it is one of the most effective manual scanners to use as backup for your primary anti-virus and anti-spyware programs.
A-SquaredOne of the best free anti-Trojan (and anti-malware) scanners available. The free version has only an on-demand scanner, and does not provide real-time protection (SpywareTerminator will do that). Run on demand. It is advisable to have both A-Squared and AVGAntiSpyware.
AdAware Advanced protection from known data-mining, aggressive advertising, Trojans, dialers, malware, browser hijackers, and tracking components. AdAware, SpyBot and SpywareBlaster all work together.
SpyBot The TeaTimer monitors the system continuously, protecting system files and the registry from malware. SpyBot also addsabrowser helper object (BHO) to Internet Explorer. By using this, SpyBot S&D blocks the bad downloads (like installation of ActiveX components or other BHOs installed by spyware without the user's knowledge) automatically.
SpywareBlaster Prevents the installation of malware onto your system. SpywareBlaster isatool that is run once, verses continual running in the background. Its working principle can be described as follows: many spyware and hijackers make certain registry entries and are identified by CLSIDs. SpywareBlaster hasadatabase of these bad CLSIDs. When you run SpywareBlaster once, it sets the kill bit of the bad CLSID as "1". This means the specific CLSID is killed, or not allowed to register, preventing installation of the spyware. SpyBot S&D hasasimilar feature. SpywareBlaster also hasaminor feature of importingalist of blacklisted cookies into Firefox. Also you may use Dak's custom blocking list to enhance effectiveness.
high jacking analyzer-post log to tech support sites for eval.
alternate anti-virus program.
http://www.filehippo.comမှာ shareware တွေအကုန်ရပါတယ်။
alternate anti-virus program
interactively capture & browse data, viewing summary and detail information for each packet
alternate personal firewall
detection and removal of cool web search search
createasophisticated virtual machine
behavior blocker. shows background running progs and update or tray issues
securely erase unused hard drive space
manage the important windows host file
shows real-time file system, Registry and process/thread activity
shows what objects processes have open
detailed info on running processes
lists installed drivers and services
displays open TCP/IP and UDP ports
browser helper objects scanner
active X scanner
send your email privately and anonymously
password manager alternate
for MSIE only-restricted sites
awesome registry tool
quick spyware scan, adware blocking, privacy cleanup and several system scans that can find and fix invalid registry entries and clean up temporary files. The program also analyzes your system configuration and suggests changes to optimize performance
Free Online Virus Scans !!!!!!!!!
(you must use MSInternetExplorer- it is safe to download their Active X controls)
recommended Online AV Scan
ဘယ်ဟာတွေကကောင်းတယ် မကောင်းဘူးဆိုတာ ေ၀ဖန်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကဖော်ပြပေးပေမယ့် သုံးတဲ့ members တွေရဲ့အကြံပေးချက်လေးများလိုအပ်နေပါသည်။
ကြည့်ရတာတော့ ဘယ်သူမှစိတ်၀င်စားပုံ မရဘူးဗျ။ တကယ်မှာ Download center မှာ တင်သင့်တယ်။ ဒီဘက်မှာ Thread တွေလာရှုတ်နေတယ်။ ဟီး .. စိတ်မဆိုးနဲ့နော်။ May I Help you ... လေးကမှ အသက်၀င်သေးတယ်။
ဒီဘက်မှာ လာရေးနေမယ့် အစား Download Centre မှာ တင်တာကမှ နေရာမှန်လိမ့်မယ်ထင်တာဘဲ။
အပေါ်မှာ တစ်ယောက်တောင် လာရေးသွားသေးတယ် http://www.filehippo.com မှာ အကုန်ရနိုင်တယ် ဆိုပြီး ..။ လွန်တာရှိ တောင်းပန်ပါတယ်။
Download Center မှာတင်ရတာလွယ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က အင်တာနက်မှာအလကားရနိုင်တဲ့ Freeware နဲ့ opensource programs တွေကို ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့်သဘောက ဖော်ပြပေးထားတဲ့ site တွေကိုသွားရောက်လေ့လာစေချင်တာပါ။
အခုလို reply ပေးတဲ့ dotNetCrazy ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ :d
ဒီလိုပါ အတိုဂျီး အိပ်ဇစ်တာ
စစချင်းမှာတင်သလိုမျိုး comodo က Firewall ကအကောင်းဆုံးပါ ဆိုတာမျိုးထက် ဘယ်လိုကြောင့်ကောင်းလဲဆိုတာ ပြောပြရင် အားလုံးအတွက် ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဗျ။
နောက်ပိုင်းကစပြီး ပိုခက်လာတာက အကိုဂျီး ပြောတဲ့ software တွေက ဘာအတွက်သုံးတာလဲ ဘယ် software ဘယ်မှာသုံးရမလဲ ဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိလဲ စတာတွေက ဘိုလိုတွေဆိုတော့
ပြောရရင် ဘိုစာ လေ့လာနေတဲ့ အနော်ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ဖာသာကိုယ် အရမ်းစိတ်ပျက်သွားမိတယ်။ :2: တော်တော်များများ မသိဘူးလေ။ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသုံးတွေနဲ့ ဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။
တကယ်က နားလည်အောင် ကြိုးစားဖတ်သင့်ပေမယ့် Monitor ပေါ်မှာ ဖတ်ရတာနဲ့ စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ရတာမတူတာရယ်... ဖတ်ပြီးတော့မှ ဒီ software က ကိုယ်အတွက် အသုံးမတည့်ဖို့ကများနေတာရယ် (ဟုတ်တယ်လေ အသုံးတည့်မယ့် software ဆိုရင် သိပ်ဖတ်ရခက်မှာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်ကသုံးချင်နေတယ် ဆိုမှတော့ သူ့အကြောင်း အနည်းနဲ့ အများတော့သိမှာပဲလေ) ကြောင့် reply ပြန်မလုပ်ကြတာ၊ discuss လုပ်ဖို့တို့၊ complain တက်ဖို့တို့က ပိုေ၀းသွားဘီပေါ့ဗျာ။ ဟီဟီး ပြောရမှာ အရမ်းအားနာတာပဲ ဗမာလိုလေးဆို အရမ်းအဆင်ပြေမှာ အသေးစိတ်မပြောပြနိုင်ရင်တောင် အကြမ်းဖျင်းလေးလောက် သိတဲ့သူများ ၀ိုင်းပြီးလုပ်ပေးကြပါ။ တကယ်တော့ ဒါဟာ တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။ computer တစ်လုံးမှာ အခြေခံလိုအပ်နိုင်တဲ့ software တွေပေးတာပဲ လိုအပ်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းက ပေးကားပေး၏ မရ ဆိုသလိုဖြစ်နေလို့ပါ။ ဥပမာ free ရတဲ့ Firewall တွေထဲမှာ Comodo ကတော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။ AV ထဲမှာဆိုရင်တော့ Avira AntiVir Personal လေးက မဆိုးဘူး။ (အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာကျတော့ ကိုယ့်စာကို စိတ်၀င်စားဖို့က argumentation ဆန်ဆန်လေးဖေါ်ပြပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တာပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ AVG တို့ Bit Defender တို့ဘက်က ဆွေးနွေးမယ့်သူတွေပေါ်လာမှာကိုး။) အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင် အနော်တို့ Mz Forum မှာ
online users တွေ အချိန်တိုင်း ကြက်ပျံမကျ စည်ကားလာလိမ့်မယ်လို့ထင်မိကြောင်းပါခင်ညာ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ နောက်ဆိုရင် Websites အကြောင်း softwares အကြောင်းတွေကို ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက် ဘာသာပြန်ပေးသွားပါ့မယ်။
အခုမှ ကိုယ်က ဘာလိုနေလဲဆိုတာကို သိတော့တယ်။
နီဌေးပီဟုတ် (bhope) တျေးဇူး ။ :d
Manage of File & Hard Drive
ဒီ software လေးကတော့လူအတော်များများသုံးဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
သူက Cannot delete file: Access is denied ,There has beenasharing violation ,The source or destination file may be in use ,The file is in use by another program or user , Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use ကဲ့သို့ဖြစ်နေသော file များကို lock သို့မဟုတ် kill proces သုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ ပိုက်ပိုက်နဲ့ ၀ယ်စရာမလိုပါဘူး။အောက်မှာပေးထားတဲ့ link မှာအသေးစိတ်လေ့လာပြီး download ရယူနိုင်ပါပြီ။
ကိုယ့် Hard Drive မှာရှိတဲ့ Data တွေပျောက်သွားမှာ စိုးရိမ်နေတဲ့သူများအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ program လေးပါ။
၁ မိနစ်ကို ၃၀၀ MB နှုန်းနဲ့ backup လုပ်ပေးပါတယ်။ အဲဒါကတော့ free ပေးထားတဲ့ Free Edition ပါ။သူ့မှာ free ပေးထားတဲ့ free edition အပြင် basic ,standard ,professional နဲ့ Enterprise ဆိုပြီးရှိပါသေးတယ်။အဲဒါတွေကတော့ ပိုက်ပိုက်နဲ့ပါ။အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်က link မှာကြည့်လိုက်ပါ။
File တွေကို backup လုပ်ချင်ရင်တော့ karenware က free ပေးထားတဲ့ Replicator ကို သုံးပြီး backup လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။file တွေပြောင်းနေသရွှေ့ backup လုပ်ပေးထားမှာပါ။
အင်မတန်ကောင်းတဲ့ အစီအမံပါပဲခင်ဗျာ။ ကိုယ်ဖြစ်နေတာ၊ ကိုယ်လိုနေတာနဲ့ ကိုက်ညီနေရင် အရမ်းကြီးရှာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် အများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ ကျနော်မရှင်းလို့တစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်ဗျာ။ Data backup လုပ်တယ်ဆိုတာ အပြင်မှာ CD နဲ့လုပ်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလားဟင်.. registry backup တို့ Driver backup တို့ကတော့ စက်ထဲမှာပဲပြန်မှတ်တယ်လေ။ Data backup ကျတော့ စက်ထဲမှာပြန်မှတ်တယ်ဆိုတော့ space နှစ်ဆမကုန်သွားဘူးလား။ ဘယ်လိုများပါလိမ့်နော်။:106:
ကျွန်တော်ပြောတဲ့ software ကတော့ တခြား hard drive တစ်လုံးထဲကို backup လုပ်ရင်သုံးတာပါ။
data တွေကို backup လုပ်တာတော့ နည်းမျိုးစုံရှိပြီးသားပါ။
Hardware Driver လိုအပ်ပြီး ရှာမရဖြစ်နေရင် www.windrivers.com ဒီ site ကကူညီပါလိမ့်မယ်။သည်၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ အခမဲ့ Register လုပ်ပြီးတဲ့အခါ ပရင်တာ,CD Room,Modem,Sound Card,Mouse စတဲ့ hardware အမျိုးမျိုးအတွက် လိုအပ်တဲ့ Driver Softwares တွေကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ရှာတဲ့အခါ လိုချင်တဲ့ မော်ဒယ်၊နာမည်၊ဒါမှမဟုတ် အမျိုးအစားကို ရွေးပြီး ရှာဖွေနိုင်လို့ ရှာရလွယ်တယ်။ဒါ့အပြင် Windows OS အမျိုးမျိုး၊ Bios စတာတွေကိုပါ ဒီ Site မှာရှာလို့ရပါတယ်။Hardware ရှိပြီး အလုပ်မလုပ်ရင်တော့ ဒီ Site ကကူညီပါလိမ့််မယ်။:)
ကျေးဇူးပဲဂျာ။ မဆိုးဘူး တော်တော်စုံတာပဲ။ မှတ်တော့မှတ််ထားလိုက်ပြီဗျာ။ တနေ့နေ့တော့ အသုံး၀င်မှာပါ။:)